လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြုံ​တွေ့​နေရတဲ့ Customers ​တွေကို အမျိုးအစား ခွဲခြားလိုက်ရင် အ​ခြေခံအားဖြင့် လေးမျိုး ရှိပါတယ်။
စျေးနှုန်းကို ကြည့်ပြီး စျေးနည်းတာကို ရွေးချယ်၀ယ်ယူလေ့ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို​တော့ cheap buyer လို့ ​ခေါ်တာ​ပေါ့။ ဘာလို့လဲဆို​​တော့ ဝယ်မယ့် ပစ္စည်း​တွေကို ​ရွေးပြီး ​ဈေး အသက်သာဆုံးကို ​ရွေးချယ် ဝယ်ယူ​လေ့ရှိတာ​ကြောင့်​ပေါ့။ သူတို့လို ဝယ်သူ​​တွေအတွက်​တော့ ​စျေး​လျှော့​ပေးတာတို့ buy one get one တို့က သူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်စေမယ့် အရာတွေပါပဲ။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ Difficult buyer လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ စျေးနည်းစရာ မလိုဘူး၊ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ရစ်မယ်ဆိုသူတွေပေါ့။ သူတို့က ဒီနေ့စိတ်သိပ်မကြည်ဘူးဆိုပြီး သင့်ကိုယ်ပါ စိတ်မကြည်အောင်လုပ်တတ်သူတွေပါ။ သူတို့ကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲ မှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့ ဘာကိုမှ စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေကို ရောင်းချတဲ့နေရာမှာတော့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အကောင်းဆုံးပေးနိုင်ခြင်းဟာသူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် နည်းပါပဲ။ ဒီလို customer မျိုးတွေဟာ အစပိုင်းမှာ ခက်ခဲပေမယ့် ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုကို သဘောကျသွားပြီဆိုရင် Loyal Customer တောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ သူမျိုးတွေပါ။
တတိယတစ်မျိုးကတော့ Sophisticated buyer လို့ခေါ်တာ​ပေါ့။ သူတို့က သူတို့ ဘာကို ၀ယ်နေတယ် ဘာကို ၀ယ်ချင်တာလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ သူ​တွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီပစ္စည်းမျိုး ဝယ်မယ်
စစဥ်းစား ကတည်းက သူတို့၀ယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းအကြောင်းသိအောင်လုပ်ထားတယ်။ သင့်ဆီမလာခင်ကတည်းက အပေါင်းအသင်းတွေဆီ မေးမြန်းစုံစမ်း ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ customer တွေဟာ မေးခွန်းများများမေးတတ်ကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ အချိန်ယူတတ်ပါတယ်။ ၀ယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်လည်း သေချာပေါက်၀ယ်တဲ့သူမျိုးပါ။
နောက်ဆုံး တစ်မျိုးကတော့ Affluent buyer ပါ။ သူတို့ကတော့ စိတ်ခံစားချက် (Feeling) အတိုင်း ၀ယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ - အင်္ကျီသွား၀ယ်တယ်ဆိုပါစို့အသားကောင်းလို့ ဘာကောင်းလို့ ဆိုတာထက် သူတို့စိတ်ထဲ သဘောကျတယ်လို့ ၀ယ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ သူတို့ကို ရောင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ မှားလေ့ရှိတာကတော့ “ကျွန်တော်စျေး​လျှော့ပေးပါ့မယ်” ဆိုတဲ့စကားမျိုးပါ။ သူတို့လိုချင်တာ စျေးလျှော့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါမျိုးစကားကြားတဲ့အချိန်မှာ စျေးလျှော့ရောင်းတာ ပစ္စည်းမကောင်းလို့လားမသိဘူး လို့ ထင်ချင်ထင်သွား နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတာကို အကဲခတ်ပြီး ရောင်းချနိင်ဖို့လိုပါတယ်။
အထက်ပါ customer ပုံစံမျိုး​တွေကတော့ မိတ်​တွေတို့ ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှု တခုကို ရောင်းချရာမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ customer လေးမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်၀ယ်ယူတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ customer အမျိုးအစားတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ lap top တစ်လုံး ဝယ်တဲ့အခါ Sophisticated buyer ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အိမ်မှာ သွားတိုက်ဆေးကုန်လို့ သွား ၀ယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ Cheap buyer ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ ရောင်းချမယ့် ကုန်ပစ္စည်းဟာ ဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းမျိုးလဲ ? ဘယ်လို customer မျိုးတွေ အများဆုံး ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိလဲ? မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ကရော ဘယ်လို customer အမျိုးအစားထဲ အများဆုံး ပါတတ်သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးနော်...
**စာမေးပွဲဖြေမယ့် ကလေးကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်ပေးရမလဲ**